Ukuhlaziywa kwesiza neSemalt Digital Agency
Ochwepheshe beSemalt banikeza izindlela ezintathu zomkhankaso we-SEO kumakhasimende — i-AutoSEO, i-FullSEO, kanye nemikhankaso ye-Analytics. Ngaphambi komkhankaso ngamunye, uchwepheshe wethu we- SEO uzobukeza ngokuphelele izinsiza eziku-inthanethi zamazinga okuhambisana nokwakhiwa kwewebhu nokuhlaziywa kwe-SEO.
Umkhankaso wethu we-AutoSEO unikezela ngokuhlaziywa okuphelele kwesitolo se-inthanethi seklayenti ukuze kusebenze injini yokusesha. Umkhankaso we-FullSEO ubandakanya ukuhlaziya okubanzi ukusiza ibhizinisi ukuthi likhule ngokubakhona kwe-Intanethi ngesikhathi esifushane. Ngenkathi, Umkhankaso Wokuhlaziya unikeza ukuhlaziywa okuthuthukile kwewebhusayithi yeklayenti.
Ngesikhathi Somkhankaso Wezibalo, sibuyekeza iwebhusayithi yethu futhi sisebenzisane nenkampani yakho ukuqinisekisa impumelelo online. Kuwo wonke umkhankaso we-Analytics, ukuhlaziya kwethu kwe-SEO kuzosebenza nenkampani yakho zonke izinyathelo zendlela. Sinikezela ngombiko ogcwele wokubukeza imisebenzi esemqoka evela kuwebhusayithi yakho, kanye nezincomo zokuthatha isayithi lakho liye ku-Google TOP ndawo.
Kuyini ukubonakala kwewebhusayithi?
Ukubonakala kwewebhusayithi inqubo yokuthola iwebhusayithi etholakala kunjini yokucinga eyinhloko efana ne-Google. Ukubonakala kwewebhusayithi kunqunywa inani elikhulu lezinsiza ngaphakathi kwesiza okuholela kwimibuzo ebalulekile; izibukiso zamanje ezinquma inani lokukhonjiswa kwesiza ngaphakathi kunjini yokusesha enikeziwe; nemininingwane ejwayelekile ngaphakathi kwewebhusayithi ebandakanyekayo ukuyithola ibalwa kunjini yokucinga.
Imvamisa yombuzo wenjini yokusesha inqunywa ngokuthi abasebenzisi bavame kangakanani ukubuza umbuzo othile kunjini yokusesha. Lokhu kubalwa ngenombolo yokubonisa ngaphakathi kwenyanga enikeziwe. Isikhundla ku-SERP umugqa wekhasi elithile lewebhusayithi eliwela lapho libekwa ngaphakathi kulowo mbuzo. Ukuqina kwesikhundla kuncike kulokho okubizwa ngokuthi "ngabantu abasondele kakhulu", okukhombisa umugqa lapho kukhonjiswa khona ikhasi lokubonisa. Lesi silinganiso sibalwa ukuthola ikhwalithi yesixhumanisi
Ochwepheshe be-SEO bakwaSemalt bangasiza iwebhusayithi yakho ukuthi ikhulise ukubonakala kwenjini yayo yokusesha. Lapho senza ukuhlaziya kwe-FullSEO yesiza, sikhetha ukuhumusha okuyikho kokubuyekezwa okudinga ukwenziwa. Kwezinye izitolo eziku-inthanethi, indawo yazo ibalulekile ukusiza ukukhulisa ukubonakala kwewebhusayithi yazo. Ngakho-ke, sikhuluma ngendawo yabo ekhasini labo lasekhaya. Kanti, amanye ama-niches, ama-semantics abaluleke kakhulu. Ngakho-ke, sithatha indlela ejulile ehlose ukuthuthukisa ukusebenza kweinjini zabo zokucinga. Uma lokhu sekuqinisekile, ochwepheshe eSemalt bazoqinisekisa ukuthi bathatha indlela enhle yokusiza ukukhulisa isibalo samagama asemqoka ngaphakathi kuwebhusayithi yakho ukuqinisekisa ukuthi siyaphumelela.
Lapho usebenza ne-SEO, kukhona ama-semantics amathathu abalulekile:
Imvamisa: Lokhu kukhombisa ukuthi zingaki ngenyanga isivakashi singena umusho othile kubha yokusesha. Uma ukhuphuka imvamisa, abantu abaningi bazothola insiza yewebhu enikezwe yona yi-SERP ephezulu.
Ukuguqulwa kuyipesenti senani labavakashi bewebhusayithi abaye benza isenzo esibalulekile kukho kunani labo eliphelele.
Imibuzo yokuncintisana isho izindleko ezizodingeka ukungena ku-TOP yaleli gama eliyisihluthulelo.
Amagama agqamile nobuningi bawo
Imibuzo yomsebenzisi imvamisa ihlukaniswe ngamaqembu ama-3:
Imibuzo ephezulu kakhulu - evame kakhulu, esetshenziswa ngabantu abangaphezu kuka-5,000 inyanga nenyanga. Lapho ukuthandwa kuphakeme, khona-ke ukukhushulwa kukhiye kuyasebenza, kepha kudinga umsebenzi omningi, njengoba kukhona ukuncintisana okuningi.
Imibuzo yemvamisa ephakathi - iyathandwa, kepha ayivamisile kunalena yemvamisa ephezulu. Inkomba ejwayelekile: Abasebenzisi abangu-1,000-5,000 ngenyanga.
Imibuzo esezingeni eliphansi kakhulu - okujwayelekile kakhulu (kufinyelela ku-1000 ngenyanga).
Ukuhlaziywa nokukhethwa kwamabinzana asemqoka kubaluleke kakhulu ekwakhiweni komgogodla we-semantic yewebhusayithi. Isisekelo semantic sibonisa ukuthi zingaki izivakashi zekhasi elinikeziwe ezidingekayo ukuze zingene ku-TOP. Lokhu kuthinta ngqo ukulungiswa kokuqukethwe. Ochwepheshe bethu be-SEO basebenzisa i-algorithm efakazelwe ukusiza ukuthuthukisa amawebhusayithi. Ikhasi eliyinhloko lenzelwe imibuzo ephakeme kakhulu. Izingxenye eziphambili zenzelwe amaphakathi amaphakathi futhi izingxenyana ziqonde emibuzweni ephansi kakhulu.
Izinyathelo zokuhlola isiza
Lapho ubheka ukwenziwa kwesiza okukhulu, ochwepheshe bakwaSemalt bakhomba izigaba ezilandelayo:
Ukuhlaziywa kombhalo we-SEO;
ukuhlaziya ithrafikhi yesiza;
Ukuhlaziywa kwe-SEO kwabaqhudelana;
ukuhlaziywa kwe-SEO yesayithi lobuchwepheshe;
ukuhlaziywa kwezixhumanisi zangaphandle esizeni;
Ukuhlaziywa kwesakhiwo se-semantic yewebhusayithi.
Ukuhlaziywa kombhalo we-SEO
Ngesikhathi sokuhlaziywa kombhalo we-SEO, ochwepheshe bethu banquma ukuhambisana kombhalo wekhasi okusekelwe kumagama angukhiye asetshenziswa ukukhuthaza isiza ezinjini zokucinga. Ukuhlaziywa kombhalo imibuzo yosesho kukhethwe ngokucophelela ngaphambi kokuthi siqale ukukhushulwa kokuqukethwe. Siqala ngokwenza ucwaningo olukhethekile ukuqhathanisa ikhasi elikhuthaziwe noma isiza sonke neminye imiphumela yokusesha ye-TOP. Ngemuva kwalokho, siqhathanisa ubude bombhalo nenombolo yamagama kumasayithi wokuncintisana anokubonakala okuphezulu. Lokhu kuvumela ochwepheshe bethu bazi ukuthi umbhalo ngamunye kufanele ube yinde kangakanani. Ngenkathi, ayikho indlela yokuqinisekisa imiphumela yokusesha ye-TOP, ngokulungisa nje izinkomba ezijwayelekile singalungisa isici sewebhusayithi ye-SEO.
Ngokuhlaziywa komongo wewebhusayithi, singakwazi ukuqonda ukuthi amagama angokhiye abaluleke kangaki avela embhalweni. Uma le nombolo ingafiki ezingeni elihleliwe, umbhalo kufanele uhlelwe. Umuntu akakwazi ukulungisa umbhalo ngokubona komuntu ngaphandle kokuhlaziya usesho oluphezulu. Injini yokusesha iqokomisa amasayithi we-TOP-10 ngokuya ngezinqubo ezithile futhi lokhu kufanele kucatshangwe njalo ngenkathi kubhalwa. Ukusebenza nemibhalo yekhasi futhi uyiqhathanise nokuqukethwe kwabaqhudelana kuzokuvumela ukuthi uhlole ukuhambisana nekhasi elinikeziwe bese wenza ukuhlaziya kwe-SEO kwimibuzo ebalulekile. Konke lokhu kuvumela uchwepheshe wethu ukuthi athole imininingwane yokuthi angathuthukiswa kanjani izinga lesiza sakhe ngaphakathi kwemiphumela yosesho lweGoogle futhi andise ukubonakala.
Ukuhlaziywa kwethrafikhi yewebhusayithi
Ukuhlaziywa kwethrafikhi yewebhusayithi kukuvumela ukuthi uthole ukuthi ukuhamba kwethrafikhi kusatshalaliswa kanjani, kanye nemithombo yethrafikhi. Ngalesi sigaba, kuyachazwa ukuthontelana kumawebhusayithi wabaqhudelana ukuze uqonde kangcono imakethe. Kulolu hlobo lokuqanjwa kabusha, kusetshenziswa izinsiza ezikhethekile. Lokhu kusivumela ukuthi sikhiphe imininingwane elandelayo:
inani lezivakashi ezihlukile;
inani lokubukwa kwekhasi ngeseshini ngayinye;
imithombo yethrafikhi (eqondile, yokudlulisela, e-organic, ekhokhelwayo, neyenhlalo).
Ukuhlaziywa kwethrafikhi esizeni kuyindlela yokuhlola ithrafikhi yalabaqhudelana.
Ukuhlaziywa kwe-SEO kwabaqhudelana
Yize ukwenza ucwaningo lwe-SEO Iwebhusayithi yomqhudelana kungumsebenzi omkhulu, kukuvumela ukuthi ubheke ngemuva kwezigcawu zomncintiswano ukuthola ukuthi:
izindlela zokwandisa okuqukethwe;
kangaki futhi kangaki amasayithi axhumana nabantu ancintisana nabo;
lokho oncintisana nabo okungekho esitolo sakho se-inthanethi;
amaphutha kumawebhusayithi ancintisana nawo.
Ukuqhathanisa isiza sakho nalabo oqhudelana nabo kukuvumela ukuthi uqonde ukuthi ungasithuthukisa kanjani isikhundla sesiza sakho jikelele. Uchwepheshe weSemalt uzofunda futhi aqaphe izingosi zabaqhudelana zakho ukuze ufunde kabanzi mayelana nemakethe yakho ye-niche futhi wandise lelo lwazi ukuthuthukisa imiphumela yakho yokusesha.
Ukuhlaziywa kobuchwepheshe bewebhusayithi
Ukuhlaziywa kobuchwepheshe bewebhusayithi kungokwesigaba sokuhlaziywa okujulile kwe-SEO. Ukwenza ukuhlaziya kobuchwepheshe kudinga umuzwa omningi emkhakheni wokunyuswa kwewebhusayithi, ochwepheshe bakaSemalt abanawo. Isici esinzima kakhulu ekuhlaziyweni lobuchwepheshe ukuhunyushwa kwedatha. Ukuhlaziywa kwethu kwezobuchwepheshe kufaka lezi zindawo ezilandelayo:
Ukuhlaziywa kokukhonjwa kwesiza kukhombisa ukuthi mangaki amakhasi ahilelekile ekusesheni kwe-Google. Uma injini yokusesha ibona ikhasi lakho izikhathi ezingama-50, kanti izimbangi zinamakhasi angama-300, iwebhusayithi yakho ngeke ibe nesikhundla esiphakeme emiphumeleni yokusesha ye-organic yamagama asemqoka ephezulu.
Ukuhlaziywa kokubonakala kwesiza kukhombisa wonke amagama angukhiye isayithi elidinga ukuthatha isikhundla esiholayo ezinjini zokusesha. Leli ithuluzi elinamandla lokuthola amagama asemqoka amasha ngokushesha ukukhuthaza nokuthola amakhasi ancintisana kakhulu.
Ukuhlaziywa kwegama elingukhiye lesiza kufaka ukuqoqa imininingwane efanelekile evela kwisiza somqhudelwano, ngemuva kwalokho imibuzo ebalulekile ihlaziywa, ihlolwe kuma-semantics, ihlanganiswe, futhi isetshenziswe.
Ukuhlaziywa komthwalo wesiza kukala isivinini somthwalo wesiza, emva kwalokho siqhathaniswa nesayithi kusuka ekubonisweni kwe-TOP. Le nqubo ikuvumela ukuba uthole amakhasi wezinkinga kusayithi lakho.
Ukuhlaziywa kwesayithi okuxhumanisa kuhlola izixhumanisi ezingaphakathi zekhasi lesayithi. Irobhothi lokusesha lingabona amakhasi wesinye isayithi uma amanye amakhasi enezinsizakusebenza ezifanayo noma amasayithi angaphandle axhumeka kuwo. Kwezinye izimo, ukuxhumeka okunekhono kwanele ukuqhubekisa indawo kusesho lwe-TOP.
Ukuhlaziywa kwekhasi eliyisiqalo sesiza kuyadingeka lapho ukukhushulwa kwenziwa ngemibuzo ephezulu kakhulu. Isizathu sesibili sokuhlolwa okuningiliziwe kwekhasi eliyinhloko ukuqonda kangcono ukuthi isisindo samakhasi sithunyelwa kanjani phakathi kwezimbangi zakho. Isizathu sesithathu ukuthola indawo evamile phakathi kwemiphumela ephezulu namakhasi ayo amakhulu futhi asebenzise amasu awo ngesitolo sakho esiku-inthanethi.
Ukuqhathanisa amathegi we-meta kusuka kusiza somqhudelwano wakho kuyadingeka ekukhuleni. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa abakhaseli futhi kuvumela, phakathi kwezinye izinto, ukuthola amaphutha kusayithi lakho, okuqukethwe okunganiki inkomba, ukuqondiswa kabusha okuyiphutha, nezixhumanisi ezaphukile. Uma umuntu ehlaziya amathegi e-meta ngendlela ehlosiwe futhi eqondile, imibuzo engukhiye uvame ukutholakala.
Ukuhlaziywa kwezixhumanisi zangaphandle esizeni
Lapho sihlaziya izixhumanisi zangaphandle esizeni, sithola uhlu lwawo wonke amasayithi amakhasi namakhasi axhumanise iwebhusayithi yakho, kanye nama-anchors isikhathi esibekiwe. Lokhu kuhlaziywa kwethulwa njengendlela yombiko wohlobo lwethebula kanye negrafu yokwanda kwesisindo sereferensi. Izixhumanisi ezingaphandle kanye nama-backlinks kunesihloko esithi "esinentshebe" yengxoxo phakathi kwama-SEO. Okwamanje, kunombono wokuthi akukho sixhumi se-link esizosiza uma kungekho sakhiwo esiyisisekelo semiyalo futhi imithetho yesisekelo ye-SEO ayilandelwa.
Ukuhlaziywa kwesakhiwo semantic sendawo
Lokhu kubandakanya izinyathelo ezilandelayo:
ukwakhiwa komongo oyisisekelo;
ukuqhathanisa imiphumela kanye nesakhiwo samanje.
Ngokuhlaziya isakhiwo se-semantic sewebhusayithi, uzoletha wonke amakhasi akho ngokulandelana. Isakhiwo semantic ukuhleleka kwezincwadi zekhathalogu ezinembile umsebenzisi nezinjini zokusesha. Manje, amagama asemqoka afakwa engxenyeni yesayithi yesayithi. Ukwenza ukucubungula kokuma kwesayithi ngokwezifiso, ukuhlaziya ukwakheka kwendawo, ukuhlaziya umongo oyindabuko, kanye nokuhlaziywa kwezimpawu zemantane wonke kufanele kwenziwe.